पुस्तक हराएको सूचना - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
- शिव मुखिया , काठमाडौं ,
साथीको सर्त मबाट गम्भीर रुपमै उल्लंघन भएको कुरामा कुनै सन्देह थिएन। पुस्तकहरु मेलोसँग पढिसिध्याँए। त्यसपछि कहाँ थन्को लगाइयो? हेक्का भएन । डेरा पुग्नासाथ पुस्तकको र्‌याक खोतलियो। ओछ्यान पल्टाइयो । दराज, कुना काप्चा चाहारियो। एकाध पुस्तक फेला परे, त्यो पनि पूर्ण अंगभंग अवस्थामा। पुस्तकको खाली पाना छोरीको कलाले सचित्र रंगिइसकेको थियो। कतै बाङ्गोटिङ्गो राष्ट्रिय झन्डा, कतै त्रिभूज शैलीको हरिया डाँडापाखा, कतै बडेमाको गोलाकार घाम । कुनै पुस्तकको अवेशष समेत फेला परेन। ति कहाँ गायब भए?
म लत्याकलुतुक गलें। हराएको पुस्तक सकुशल उद्वार गर्नेे झिनो आशा पनि बाँकी रहेन। अब, एउटै विकल्प रह्यो, नयाँ पुस्तक किन्ने। यसबाट सहज रुपमा पुस्तकको समस्य त हल हुन्थ्यो तर, त्यसमा सम्वन्धित लेखकको हस्ताक्षर कहाँबाट ल्याउने?
साथीले कुनै पुस्तक प्रदर्शनीमा खरिद गरेको उक्त पुस्तकमा लेखकको प्रेममय दुई-चार शब्दसहित शानदार हस्ताक्षर थियो। साथसाथै, पुस्तक खरिद गरेको मिति समेत त्यसमा उल्लेख थियो। त्यसैले चोर बाटोवाट पनि समस्या हल नहुने कुरा प्रष्टै भयो।
इलाम बजारका केही पुस्तक पसलमा यस्तै सूचना टाँसिएका हुन्थे । तर, सज्जनवृन्दहरु त्यसैको आडमा उभिएर हाताहात दैनिक पत्रपत्रिका पढिरहेका देखिन्थे। लाग्थ्यो, पत्रपत्रिका-पुस्तक भनेको यस्तो खुराक हुन्, जसलाई निःशुल्क ग्रहण गर्दा न अपराध लाग्छ, न लाज।
एकदिन प्रकाश ‘कोविद’ को ‘देवता’ पढिनसक्दै हरायो। शंकास्पद दुई-चार साथीको ओछ्यान, सिरानीमा खानतलासी लिइयो। तर, देवता फेला परेन। पेवा अलैंची बेचेर किनेको उपन्यास पढ्न नपाएकोमा साह्रै खल्लो लाग्यो। खोजी कार्य जारी थियो। अन्ततः फेला प¥यो देवताको भग्नाअवशेष, छिमेकी राई बहिनीको घरमा। त्यसको कुनै पाना सद्दे थिएन। पछि रहस्य खुल्यो । मसँग सुत्न आउने भाइले देवता चोरेर राई बहिनीलाई ‘सरप्राइज गिफ्ट’ दिएका रहेछन्।
‘अरे, तिमीले पनि मेरो पुस्तक लगेको छौ र? मैले त यादै गरेको छैन त’ साथीको जवाफ अनपेक्षित थिया। उनले थपे, ‘यार, तिम्रो नाम कहाँ ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने हो र? अरु काजीहरु पो छन् त, पुस्तक लगेर नफर्काउनेहरु।’
प्रकाशित 2016-12-23 13:23:42